Afaka tonga ny tanàna lamasinina avy na aiza na aiza any Italia, na koa, toy ny Soisa sy Frantsa. Misy tapaka, fiarandalamby haingam-pandeha izay mandeha imbetsaka isan'andro avy any Milan sy Roma, fa koa avy Venice. Ireo nivezivezy maka latsaky ny adiny roa, ary azonao ny mahita ny havoana tsara tarehy sy ny sahan'i Italia.
Dia toy izany ianareo vonona ny hankafy divay tanàna any Eoropa? SaveATrain.com Hanampy anao hahazo ny tanàna misy ao Eoropa, fifadian-kanina, levitra, ary tamim-pitsikiana!
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra sy marina hanome antsika ny voninahitra miaraka amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy, na ianao dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fwine-cities-europe%2F%3Flang%3Dmg - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)
#bestwine europeantravel europetravel Tranride fiarandalamby tendron'ny fampiofanana Train Travel fiaran-dalamby Travel torohevitra travelaustria travelfrance travelgermany travelitaly divay